Ukubukwa KweBheteli EseJamani
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiCatalan IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKabyle IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaya IsiMingrelian IsiNahuatl (saseCentral) IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTahiti IsiTajiki IsiTarascan IsiTelugu IsiTigrinya IsiTlapanec IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUzbek IsiValencian IsiXhosa IsiZulu isiZapotec (saseIsthmus)
Ukubukwa Kwesebe LaseJamani
AmaNgqina kaYehova aneeofisi zamasebe eziyi-15 eziprintayo ehlabathini lonke. Elinye isebe liseJamani kwidolophu yaseSteinfels.
NgoMeyi 23-25, 2014, eli sebe lamema abamelwane, oosomashishini kuquka nezidwesha zalapho ukuze zize kubuka. Umxholo waloo mini wawusithi “Iminyaka Eyi-30 ESelters,” njengokuba lalivulwa eli sebe ngoAprili 21, 1984.
Babengaphezu kwabayi-3 000 abantu abeza kubuka eli sebe. Usodolophu oneminyaka ephantse ibe yi-30 esebenza kule ngingqi wathi: “Ndisoloko ndikuvuyela ukutyelela isebe lamaNgqina kaYehova.” Woleka ngelithi: “Iyothusa indlela ekwakhawuleza ngayo ukwandiswa eli sebe laseSteinfels ukususela ngo-1979 ukuya kutsho ngo-1984.”
Iimbalasane Zale Mini
Omnye umboniso wawunomxholo othi: “Abantu BakaYehova KuMbindi WeYurophu.” Iindwendwe zabona imbali yeminyaka eyi-120 edlulileyo yamaNgqina akulo mmandla. Sithethanje, lo mboniso wembali unako ukuwubona kweli sebe.
Omnye umboniso wawuneeBhayibhile zakudala kunye nezibalulekileyo. Ezi Bhayibhile ziquka eyokuqala yesiJamani eyagqitywa ngo-1534 kunye neBhayibhile yePolyglot kaElias Hutter eguqulelwe kwiilwimi eziyi-12. Ukongezelela, kwakukho nezinye izixhobo ezazinceda abo babekho bayiqonde kakuhle indlela yokusebenzisa imigaqo yeBhayibhile namhlanje.
Iindwendwe zaboniswa indlela abaphila ngayo abasebenzi abangaphezu kwabayi-1 000 beli sebe. Iindwendwe zaqala zaboniswa amagumbi okulala. Zafumana nento esiwa phantsi kwempumlo zaza zahambahamba kuloo yadi ineentyatyambo eziyimibalabala. Olunye undwendwe lwathi: “Intle into esiyibon’ apha.”
Emva koko iindwendwe zaya kubuka oomatshini bokuprinta, neSebe Lenkonzo. Zazibonela indlela iiBhayibhile eziprintwa, zidityaniswe zize zithunyelwe ngayo kumazwe angaphezu kwayi-50. Enye indoda yathi: “Kanti amaNgqina asebenza kangaka! Akukho lizwe lingenazo iimpapasho zawo. Andazi nokuba ayenza njani yonke le nto engabhatalwa.”
Iindwendwe zisebenzisa i-jw.org
Eyona nto yabangel’ umdla ngumboniso wewebhsayithi yamaNgqina kaYehova i-jw.org. Abantu abadala nabancinane babebukele iividiyo kuyo yaye befunda neempendulo zemibuzo yabo.
Iindwendwe zemka zinoncumo lukabhlankethi ngenxa yale nkcazelo intsha yomsebenzi owenziwa ngamaNgqina kaYehova kuwo onke amazwe. Enye indoda yathi: “Zininzi izinto ebendizikrokrela ngani. Ingathi kuza kufuneka ndizikis’ ukucinga.” Ebudeni bolu khenketho, elinye ibhinqa laphindaphinda amazwi athi: “Kungona ndiqalayo ukuwazi amaNgqina!”
Ukususela ngo-1984 ukuya ku-2014
Iimagazini: 3,8 bhiliyoni
Iincwadi: 345 miliyoni
Iincwadana: 318 miliyoni
Amazwe aprintelwayo: 51
Eziprintwayo ngenyanga: 14 miliyoni
Amazwe aprintelwayo: 78
Uncwadi Oluthunyelwayo *
AmaNgqina KaYehova: 1 270 130
^ isiqe. 17 La manani ngaka-2014
^ isiqe. 21 La manani ngaka-2014
^ isiqe. 24 La manani ngaka-2014
IBheteli yindawo ekhethekileyo ephumeza umsebenzi obalulekileyo. Funda ngakumbi ngabo basebenza apho.
Yintoni Eyenziwa Kwiofisi Yesebe YamaNgqina KaYehova?
Iindwendwe ziyamenywa ukuba zityelele nayiphi na iofisi yesebe. Nawe siyakumema!
“Imbalasane Engenakulibaleka” Yafika Ngexesha